Akụkụ ime na mpụta nke Dewar bụ nke igwe anaghị agba nchara, a na-eji igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ sistemụ na-akwado ya, iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge. A na-edozi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na supercharger wuru n'ime ya nwere ike ime ka nrụgide ahụ gaa na nrụgide a kara aka ma mee ka ọ kwụsie ike n'oge eji ya, na-emezu nzube nke ngwa ngwa ma kwụsie ike. Onye ọ bụla gas cylinder a gwara mmanụ nwere igwe anaghị agba nchara mgbanaka (nchedo mgbanaka) iji chebe pipeline. Ejikọtara mgbanaka nchebe na cylinder ya na ihe nkwado anọ, a na-etinye ihe nkedo ọ bụla iji kwado trolleys na cranes iji buru cylinder gas. A na-etinye akụkụ niile na-arụ ọrụ n'elu gas cylinder maka ọrụ dị mfe. N'ebe a na-eji onwe ya eme ihe, onye ọrụ nwere ike ijikwa usoro ojiji site na valvụ na-agbapụta, valvụ booster, nlele nrụgide, valve valve, wdg. Iji hụ na eriri dị n'ime gas cylinder dị n'okpuru nrụgide nchekwa, a na-etinye valvụ nchekwa na diski rupture na gas cylinder.
A na-eji ya ibufe ma chekwaa mmiri cryogenic dị ka mmiri oxygen, mmiri mmiri nitrogen, mmiri mmiri argon, mmiri mmiri carbon dioxide, LNG, wdg gas cylinder nwere ike iji nye mmiri ma ọ bụ gas gas. Igwe gas dị mfe iji, dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi, akụ na ụba na inogide. Ihe akọwapụtara dị ka ndị a: 1. A na-eme ka usoro nkwado nke tank dị n'ime igwe anaghị agba nchara iji mezuo nzube nke obere ọkụ ọkụ na ike dị elu. 2. Ọ dị mfe iji ma otu onye nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ n'adabereghị na ya. 3. Chekwaa mmiri mmiri cryogenic dị ọcha. Nnukwu ikike nchekwa. Ike nchekwa gas nke DP175 dewar cylinder kwekọrọ na ihe karịrị 18 ugboro ikike nchekwa gas nke ọkọlọtọ gas dị elu. 4. Nrụgide dị n'ime nke gas cylinder ga-ebili n'oge nkwụsị mgbe emejuchara ya. Gas cylinder nwere usoro mkpuchi mkpuchi dị elu, na nrụgide ịrị elu ya dị ala. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ dịghị mkpa iji belata nrụgide site na valvụ nchekwa. 5. Onye na-enye ọkụ na vaporizer nwere ike ịghọta gas na-aga n'ihu ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ dịghịkwa mkpa ịwụnye vaporizer n'èzí n'okpuru usoro ọgwụgwọ.
Gases Subpackage ụlọ ọrụ
Nke gara aga: Liquid Oxygen sịlịnda
Lng Bullet tankị
Nnukwu ibu Lng
Ngdị Tang Lng